आफ्नै फोटो ‘लिक’ भए पछि तनावमा यी नायिका ! Kasthamandap Daily
आफ्नै फोटो ‘लिक’ भए पछि तनावमा यी नायिका !
अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको मारमा सबैभन्दा बढी सेलिबेटीहरु पर्ने गरेका छन् । कतिपयले जानीजानी र कतिपयले नजानेरै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने यस्ता तस्वीरले बेलाबेलामा हंगामा मच्चाउने गरेको छ ।
यसको पछिल्लो शिकार भएकी छन् नायिका राधिका आप्टे । उनको नांगो सेल्फी फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । यो फोटो युट्युबबाट अपलोड भएको छ र तिव्र रुपमा शेयर भइरहेको छ । उनले मराठी फिल्म ‘लय भारी’, बलिउड फिल्म ‘शोर इन द सिटी २० फेब्रुअरीमा रिलिज हुने फिल्म ‘बदलापुर’ मा अभिनय गरेकी छन् ।
बलिउडमा राधिका आप्टे एकदमैं चर्चित नाम हो । उनको अभिनय देखि लिएर हरेक कुरा मन पराउँने लाखौं करोडौंको संख्यामा सर्मथक रहेका छन् । उनले चर्चामा आउँनको लागि समयसमयमा केही फरक गर्ने गर्छिन । सामाजिक सञ्जाल इन्टाग्राममा २३ लाख आसपास सर्मथक भएकी उनले लाखौं आफ्ना केही तस्विरहरु राखेकी छिन । उनका यी तस्विर देखेर उनका सर्मथकहरु हौसिएका छन् । (एजेन्सी)